Akhriso+Sawiro Warbixin Ka Hadleysa Filimka Al-kataa’ib. – Bogga Calamada.com
Akhriso+Sawiro Warbixin Ka Hadleysa Filimka Al-kataa’ib.
Mu’asasada Alkataa’ib garabka warbaahineed ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay baahisay filim cajiib ah oo ay ku soo bandhigeyso weerarada dilalka qorsheysan ah iyo qaraxyada ee ciidamadooda gaarka ah ee amniga ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyo gobolka Sh/hoose.
Halkan Hoose Ka Eeg Sawirada.
sheek xasan TURKI says 3 years ago
Kdib filimka ALkataaib xarakada waxeey heshey RAG CULUS.murtadiinta waa in la laayaa
GGGG says 3 years ago
WAXAAN LAYAABEY SIDEEY MUJAAHIDIINTA U DILI KA RARAAN CABDIQAADIR AFLOW ILAALAA KA HOREYSEY
SAYFULLAH says 3 years ago
waa filim xiiso gaara xambaarsan waana filim laga daaleynin daawashadiisa.
Runtii filimkaan wuxuu murtadiinta Ku abuuray arga-gax weyn.
horayba murtadiinta waxay Ku jireen Cabsi iyo qal-qal amni.
Hadana waxaa taa kadaran in lasoo doobay ayagoo latooganayo!.
tanna waxay gaaladu iyo gaala raacda Ku abuuraysaa cabsi aad uwayn . mar hadii saxiibadoodii ayagoo maqaaxiyadaha fadhiya la tooganayo iyo kuwa ayagoo gaarigoda gaashaaman fuula ay jaxiimadu lataktay.
Filimka wuxuu kaloo firiin adag udirayaa murtadiinta oo ah inay usoo toobad Keenaan allaah adii kalena ay maridiinaa wadadii ay mareen kuwii iyaga ka horeeyey oo ah in uu allaah Ku cadaabi doono gacmaha mujaahidiinta muwaxidiinta ah.
waxana allaah ka baryenaa inu mujaahidiinta guuleeyo.
sido kele walaalaha mu’assasada AL-KATAIB allaaha barakeeyo howsha adak ay uhayaan muslimiinta.